သောသီခို: THE KAREN PURGE AND COUP - ကရင် အာဏာသိမ်းပွဲ
ယခုသတင်းက အရင်တင်ပြီးသားပို့ စ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ TREACHERY IN THE KAREN NATIONAL UNION (သို့ ) "ကေအဲန်ယူအတွင်း သစ္စာမဲ့ခြင်း" http://thawthikho.blogspot.com.au/2013/01/treachery-in-karen-national-union.html
ဆိုတဲ့ခေါင်းစီးသတင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ သတင်းတပုဒ်ပါ။ http://www.dictatorwatch.org/မှပြန်လည်ကူးယူဖေါ်ပြသည်။
Note: This isafollow-up to last week's statement - Treachery in the Karen National Union.
Dictator Watch has received additional information about the dirty tricks at the recent KNU Congress, by which the current leaders were unseated and new leaders installed. The organization's policy, which remains the same on paper, has in reality been reversed.
There were three elections at the Congress, two to select the Central Committee members, and one, by the new CC members, to choose the top leaders. The Central Committee votes were overseen byaseven person Election Commission, headed by Pastor Robert Htwe from the Karen Refugee Committee.
In the first vote, Congress participants chose 45 candidate CC members. In the second, from the candidates, they picked 31 members.
Both votes were done the same day, with the second in the late afternoon. After the vote, many participants tookabreak, for dinner.
Some young Karen people, who were observing the Congress, were suspicious of Robert Htwe's neutrality. They stayed behind to videotape the counting of the ballots. Robert Htwe counted the ballots by himself. He sat so that no one could see the actual ballots, and then read out the names supposedly chosen on them. No one else observed the names, and there was no independent check.
According to the results that he announced, the prior leaders were purged: Expelled from the Central Committee. After everyone returned from dinner and learned this, there wasacall forarecount. Robert Htwe then said that he had already burned the ballots. Even though by then it was late, he immediately left the Congress for the long drive back to Mae Sariang. There were then calls foracompletely new vote, to which all the other election commissioners agreed, but with him gone it was impossible. The next day the new top leaders were selected from the new Central Committee members, thereby completing the coup.
What happened at the Congress illustrates the deep divide in the KNU. Companies owned by cronies of Burma's dictatorship are mining various minerals in the KNU's 1st, 3rd, 4th, 6th, and 7th Brigade areas. The cronies have made handsome payments to the brigade and associated district leaders to permit the mines. Leaders in the 2nd and 5th Brigades are refusing to allow mining and even prospecting in their areas. The new top leaders support the mining and other economic development.
This means throwing caution to the wind, and the effective reversal of long-standing KNU policy. The mines are destroying the security for local Karen villagers, as the mining companies construct new roads. These in turn greatly enhance the Burma Army's communications, and ability to move troops and supplies. Under the new policy, mining in these areas will expand even more.
The people and rank and file KNLA soldiers are opposed to the policy change. The people will suffer, and onlyafew individuals - the KNU leaders - will benefit.
Onapersonal note, I got involved in the Burma pro-democracy movement in 1994 through the Karen cause, and have backed the KNU and KNLA ever since, even though I haven't always agreed with their strategy. I am stillafriend of the Karen people, but given the purge and coup that was perpetrated at the Congress, and the new pro-development policy, I believe the organization is now fundamentally corrupted, and does not speak for the people. The KNU is no longer the "mother" or "umbrella" Karen organization.
The outcome of the Congress was heavily influenced by regime negotiator Aung Min, and the Norwegian government, which backs him and the dictatorship's "Myanmar Peace Center." Together with former KNU leader Htoo Htoo Lay, they aggressively worked to expel the old leadership, who advocated the continued defense of the Karen people, and great caution both for economic development and refugee repatriation.
The similarly Norwegian-led multi-million dollar "Peace Fund," which is directed by former U.N. official Charles Petrie, was established to help IDPs and returning refugees. Robert Htwe, as head of KRC, will haveamajor role in distributing the funds. He is holdingaworkshop this week, which will consider how repatriated refugees can be used for contract farming and other economic development projects. KNU policy has always been that the refugees, and only when they could do so safely, should be able to return to their homes.
Robert Htwe and the other top KNU leaders are imposing the new policy to force the refugees back, and not to their homes. There will no doubt be opportunities for them to expropriate some of the Peace Fund money.
All of this isadisaster for the Karen people. The KNU's leaders have surrendered and are following the enemy's orders, for personal gain. Needless to say, Karen people, KNLA soldiers, and Karen civil society organizations both inside and outside Burma, should aggressively oppose this.
The coup in the KNU impacts more than the Karen. The new leaders just met Burma Army Commander-in-Chief Min Aung Hlaing. This was incredibly unseemly, given his major offensive underway against their ethnic brothers, the Kachin. The new leaders are not only betraying the Karen people, but the other ethnic nationalities as well; Indeed, all of Burma.
THE KAREN PURGE AND COUP
KNU ခေါင်းဆောင်သစ်တင်ပွဲအတွင်း မဲလိမ်ခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်
အာဏာရှင်ဆောင်ကြည့်ရေး အဖွဲ့အနေဖြင့် ကေလ်အမ်ယူကွန်ဂရပ် လက်ရှိခေါင်းဆောင်များကို ဖြုတ်ချပြီး ခေါင်းဆောင် သစ်များခံအပ်မှု့နှင့်ပတ်သတ်၍ သတင်းအချက်အလက်များရရှိပါသည်။ ကေလ်အမ်ယူလအနေဖြင့်မူလပေါ်လစီအတိုင်း ဆက်လက်ရပ်တည်မည်ဟုဆိုသော်လည်း လက်တွေ့တွင် လုံးဝကွဲပြားလျှက်ရှိပါသည်။
ကရင်ကွန်ဂရပ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ၃ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့သည် ။ ပထမ ရွေးကောက်ပွဲ၂ခုတွင် ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ ၀င်များ ၊ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင် အသစ်များ၊ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်များ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ရွေးကောက်ပွဲကိုကရင်ဒုက္ခသည်များကော်မတီမှ ဆ၇ာတော်ေ၇ာ်ဘတ်ထွေး နှင့်အတူ အဖွဲ့ဝင်၇နှစ်ဦးမှ ရွေးကောက်ပွဲ၏ မဲစာရင်းများကို ဆောင်ကြပ်ခဲ့သည်။ပထမ မဲပေးပွဲတွင် ကွန်ဂရပ်သို့
လတက်ေ၇ာက်လာသူများကဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ၄၅ဦးကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအဆင့်လတွင် ထို့၄၅ဦးထဲမှ ၃၁ဦးကို ထက်မှန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ထို့ရွေးကောက်ပွဲ ၂ရက်လုံးကို ၁ရက်ထဲတွင်အပြီး ကျင်းပခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်းရွေးချယ်မှု့ကို ထို့နေ မိုးချပ်မှသာ အပြီးလသတ်နိုင်ခဲ့ သည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူများ ညစာ စားကြပါသည်။
ကွန်ဂရပ်သို့တက်ေ၇ာက်လာသော် ကရင်လူငယ်အချိ့အနေဖြင့် ရော်ဘတ်ထွေး၏လုပ်ဆောင် ချက်များကို သံသယ၇ှိ ကြသည်။ မဲရေတွက်နေစဉ်ကာလတွင် ဗီတီရိုမှတ်တမ်းတင်နေမှု့များကို ၄င်းတို့ အနေဖြင့် ပြုလုပ်နေကြသည်ကိုလည်း သတိပြုမိသည်။ ရော်ဘတ်ထွေးသည် မဲပြားများကို သူတစ်ဦးထဲရေ တွက်ပြီးမည်သူကိုမျှ တင်ပြခြင်းမရှိပါ။ ထို့နောက် အရွေးခံရသူများ၏ အမည်များကိုသူဖာသာ ဖတ်ကြားသွားခဲ့သည်။မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မည်သိုမည်ပုံ အရွေးကောက်ခံကြရသည်ကို မသိကြပါ။ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သတ်၍ မည်သူမျှ မေးမြန်းစုံစမ်းခြင်း မရှိပါ။ရော်ဘတ်ထွေး၏ အလိုရဆိုရင်
အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းများအားလုံးရွေးကောက်ပွဲရူံးပြိး ဗဟိုကော်မတီမှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံကြရသည်။တက်ရောက်သူများမှာလည်း ညစာစားပြီး အစည်းအဝေပြန်တက်သော်အခါမှရွေးကောက်ပွဲ၏ ရလဒ်ကို
သိခဲ့ကြရသည်။ အချိ့သော်သူများမှာမဲများပြန်လည်ရေတွက်ပေးရန် တောင်းဆို မှု့များ ရှိခဲ့သည်။ ထို့အခါရော်ဘတ်ထွေးမှ ထို့မဲပြားများ အားလုံးကို မီးရိူးပျက်စီးခဲ့ပြီးပြီးဟုဆိုသည်။v အစည်း အဝေးမှာ ညည့်နက်သံခေါင် မှ ပြီးဆုံးခဲ့သော်လည်း ရော်ဘတ်ထွေးသည် မိမိနေထိုင်ရာ မယ်စလီရမ် သို့ ညတွင်ခြင်း ပြန်သွားခဲ့သည်။
တက်ေ၇ာက်သူများအနေဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲပြန်လုပ်ရန်တောင်းဆိုမှု့ကို အခြားသောရွေး ကောက်ပွဲ ကော်မရှင်များက သဘောတူခဲ့သော်လည်းရော်ဘတ်ထွေး မ၇ှိ တော်သည်အတွက်
ကြောင့်နောက် တစ်ကြိမ်ရွေးကောက် ပွဲအသစ်လုပ်ရန် မဖြစ်နိူ်င်တော့ပါ။
နောက်တစ်နေ့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်၇ရှိ သူများ၏ စာရင်းကို ကြေငြာပြီး ကေလ်အမ်ယူအာဏာသိမ်းပွဲကို အောင်မြင်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဤကိစ္စကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
ကေလ်အမ်ယူတွင် အကြီးအကျယ်သဘောထားကွဲလွဲမှု့၇ှိသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကေလ်အမ်ယူ တပ်မဟာ ၁ ၊၃၊ ၄၊ ၆၊ ၇နယ်မြေများတွင် ခရိုနီမျာမှာ ဓါတ်သတ္တူရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ ကို အကြီး ကျယ်၇ှာဖွေလျှက်ရှိသည်။ ထို့ခရိုနီကုမ္မဏ္ဍီများမှာ ၊ထို့တပ်မဟာများနှင့်ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကိုအကြီးအကျယ်လက်ထိုး၍ပါမစ်များ ရယူခဲ့သည် ။
သို့သော်လည်း အလာအလာကောင်းသော် တပ်မဟာ ၂ နှင့် ၅ခေါင်း ဆောင်များက ပြတ်သားစွာငြင်း ပယ်ခဲ့သည်။ ယခုအသစ်ရွေးချယ်ခံထားရသောဗဟိုကော်မတီများမှာ ခရိုနှီများ၏ အလိုကျ လုပ်ဆောင်မည် သူများဖြစ်သည် ။ ဤဖြစ်ရပ်ကို ထောက်ရူ့ခြင်းအားဖြင့် ကေလ်အမ်ယူ၏ နှစ်ပေါင်းများစွာထားရှိခဲ့သော သဘောထား လုံးဝပြောင်းလွဲသွားသည်ကိုသိနိူင်သည်။ သတ္တူတူဖော်ရေး လုပ်ငန်းများသည် ဒေသခံလုပ်သားပြည်သူများ ၏လုံခြုံးရေးနှင့် စားဝတ်နေရေးများကိုအကြီးအကျယ်ထိခိုက်လာတော့မည်ဖြစသည်။မိုင်းကုမ္မဏ္ဍိများ၏သစ်တောများခုတ် ထွင်မှု့လမ်းအသစ်များဖောက်လုပ်မှု့တို့၏ ဒဏ်ကို လုပ်တွေ့တွင်လည်း ဒေသခံများစတင်ခံစားနေရပြီးဖြစ်သည်။
ထို့အတူ မြန်မာစစ်တပ်အနေဖြင့်မိမိ၏စစ်တပ်များကို ဒေသအတွင်း အခိုင်အမာ တည်ဆောက်ပြီးလိုအပ်လျှင်လိုအပ် သ လို့ အချိန်မှီပြုလုပ်နိုင်ရန် လက်နက်၊ ရိက္ခာ၊ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ အကောင်ထည်ဖော် လျှက်၇ှိသည်။ ကေလ်အမ်ယူ၏ပေါလစီအသစ်အရ ဆိုလျှင် ဓါတ်သတ္တူတူဖော်ရေးလုပ်ငန်းများကို အကြီးအကျယ်အကောင်ထည်ဖော်လုပ်ဆောင်မည် ဖြစ်သည်။လူထူနှင့် က၇င် အမျိးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် အရာ၇ှိ၊ အရာခံအကြပ်တပ်သား အားလုံးက ကေလ်အမ်ယူ၏ ပေါလစီအသစ်ကို ဆန်ကျင်သည်။ဤပေါလစီအရဆိုလျှင် ကေလ်အမ်ယူခေါင်းဆောင်အချိ့ မှလွဲ၍ ကေလ်အမ်ယူအမျိးသာတစ်ရပ်လုံး ဒုက္ခရောက်တော့မည်ဖြစ်သည်။
ကျွှန်တော်အနေဖြင့် မြန်မာန်ုင်ငံဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးလှုပ်ရှားမှု့များတွင်၁၉၉၄ခုနှစ်မှ စ၍ ကရင်အရေး ကေလ်အမ်ယူအဖွဲ့ နှင့်ကရင်အမျိးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်များနှင့်(၄င်းတို့နှင့်လုံးဝသောထားမတူညီတိုင် ) ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိလည်း ကျွှန်ပ် သည် ကရင်လူမျိးအားလုံး၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သည် ။ လက်၇ှိဖြစ်ပွားခဲ့သော ကရင် ကွန်ဂရပ်၏ ဖြုတ်ထုတ်အာဏာ သိမ်းမှု့ များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လက်၇ှိကေလ်အမ်ယူသည် ဖောက်ပြန်သော ၊ ကရင်လူထုကိုကိုယ်စားမပြုသောအဖွဲစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟုယူဆသည်။ သိုဖြစ်ပါ၍ ကေလ်အမ်ယူသည်
ကရင်အဖွဲစည်း အာလုံး၏ မိခင်အဖွဲစည်းမဖြစ်နိုင် တော့ပေ။ လက်၇ှိ ရွေးကောက်ခံထားရသောလူများမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်အောင်မင်း၏ သြဇာ သက်ရောက်ခံ နော်ဝေးအစိုးရနှင့် ၄င်း၏ (မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးဌာန၏ အလိုကျပုဂ္ဂိူလ်များဖြစ်သည်။) ။ကရင်အမျိးသားခေါင်းဆောင် ထုးထူးလင်းနှင့် ပူးပေါင်းပြီးထို့အဖွဲစည်းများသည် မူလလက်ဟောင်း ကေလ်အမ်ယူခေါင်းဆောင်များကိုဖြုတ်ထုတ်
အာဏာလု ပြုလုပ်ခဲ့ကြသဖြင့် မူလခေါင်းဆောင်များ၏ရည်မှန်ချက်ဖြစ်သော က၇င်အမျိးသားကာကွယ်ရေး ၊ စိပွားရေးဖွံဖြိုးမှု့နှင့်ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်နေရာချ ထားရေး လုပ်ငန်းများ
အစီအစဉ်များကိုသတိ၇ှိ၇ှိဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် ရည် ရွယ်ချက်များမှာ ပျက်ပယ်သွား ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။အလာတူပင် နော်ဝေးအစိုးရက ဦးဆောင်သော ဒေါ်လာ သန်းပေါင်းများစွာ ကုန်ကျမည်ငြိမ်းချမ်းရေး
ရန်ပုံငွေ (ထို့အဖွဲ့ သည် un ၀န်းထမ်းဟောင်း CharlesPetrie က ဦးဆောင်သည်။) အဖွဲ့သည် ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်းနေရာချထားရေး နှင့်ပြန်လည်းထူထောင်ရေး တို့အတွက် တာဝန်၇ှိသည်။ ကရင် နေရာချထားရေး ကော်မတီခေါင်းဆောင်ေ၇ာ်ဘတ်ထွေး သည် ထို့အဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ရေး တွင် အဓိကကြသူတစ်ယောက် ဖြစ်သည်။ ယခုလာမည် သတင်းပတ်တွင် ကရင် ဒုက္ခသည်နေရာချထားရေးနှင့် စိုက်ပျိးရေး၊ စီပွားရေးဖွံဖြိုးမှု့ ပရောဂျက်အလုပ်ရုံးဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကို ရော်ဘတ်ထွေးက ဦးဆောင်၍ ကျင်းပမည်။ ကေလ်အမ်ယူ၏ မူလ ဒုက္ခသည်များ ပြန်လည်လက်ခံရေးပေါ်လစီမှာ ၄င်းတို့၏ လုံခြုံရေး ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ခွင် များအပေါ်တွင်သာအခြေခံပါသည်။
ရော်ဘတ်ထွေးနှင့် ကေလ်အမ်ယူခေါင်းဆောင်အချိ့ကတော့ ၄င်းတို၏ပေါ်လစီအသစ်ကို ကိုင်စွဲပြီး ဒုက္ခသည်များကို အတင်းကျပ်ပြန်ခေါ်မည်ဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့၏ အိမ်ယာများသို့ ၊ ပြန်လည်နေထိုင်
ခွင့်မပါရှိပါ။ သို့သော်လည်းငြိမ်းချမ်းရေးရန်ပုံငွေအဖွဲမှ ရရှိသော် အကျိးမြတ်များကို ထို့ခေါင်းဆောင်များသာခံစားကြပါလိမ်မည်။ဤကိစွအားလုံးသည် ကရင် အမျိးသားတစ်ရပ်၏ ဆုံးရှုံးမှု့တစ်ရပ်ဖြစ်သည်
ကေလ်အမ်ယူ ခေါင်းဆောင်များသည် မိမိတို့အကျိးရလဒ်ကိုသာကြည့်ပြီး ရန်သူကိုဒူးထောက် လက်မြောက်ပြီး ၊ ရန်သူ့ခိုင်းသည်အတိုင် တစ်သွေမယိမ်းလုပ်ဆောင် နေကြသည်။သို့ဖြစ်ပါ၍ ကရင် အမျိးသားတစ်ရပ်လုံး ၊ကရင်အမျိးသားလွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်သား များ ၊ က၇င်လူမှု့ရေးအဖွဲစည်းများ(ပြည်တွင်း\_ပြည်ပ ) အနေဖြင့် ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန်ကျင်ရမည်အချိန်ဖြစ်သည်။ ဤအာဏာ
သိမ်းမှု့သည် ကရင်အမျိးသား တစ် ရပ်လုံး၏အကျိးစီပွားတစ်ရပ်လုံးထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည်။ ထို့ခေါင်းဆောင်များသည် မြန်မာစစ်တပ်ဗိုလ်ချပ်ကြီးမင်းအောင်နိုင်နှင့် လက်တလောတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို ညီနောင်းကချင်အမျိးသားများ ပေါ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်မှမတရားထိုးစစ်ဆင်နွဲနေသော်ကာလ အတွင်း ယခုကဲံ့သို တွေဆုံချင်သည်မဖြစ်သင်ပေ။ ဤခေါင်းဆောင်သစ်များသည်
မိမိတို့ကရင်အမျိးသားများ အပေါ်တွင်သစ္စာဖောက်ယုံထင်မက လူမျိးစု တစ်ရပ်လုံး နှင့် မြန်မာပြည် တစ်ရပ်လုံးကို သစ္စာဖောက်သူများဖြစ်သည် ဟု ယူဆ နိုင်သည်။(သတ်ပုံအမှားများကို မူရင်းအတိုင်း ကူးယူထားပါသည်။)
If this keeps on going this way, I foresee another armed fraction will sprout up soon.This article already reveals divisions.
ကဲ ၁၅ ကြိမ်မြောက် KNU ကွန်ဂယက်ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုသံသယနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာ ကြာပြီလေ ဒါပေမဲ့ မှားမှာစိုးလို့ အသာစောင့်ကြည့်နေတာ။မနေ့ကပဲ ဖဒိုကြီးမန်းငြိမ်းမောင် ရန်ကုန်မြို့ အလုံမှာကျင်းပတဲ့ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲမှာပြောတဲ့ စကားတွေလေသံတွေစကားလုံးတွေရော မီဒီယာတွေနဲ့ Interview မှာပြောတဲ့စကားတွေရောနယ်စပ်ကရတဲ့သတင်းတွေ အခုတင်ထားတဲ့ Robert Htwe ရဲ့ Misleading Count of Votes at 15th Conference တွေရော ရောဘတ်ထွေးရဲ့ ယခင်အကျင့်စာရိတ္တတွေပါခြုံငုံပြီး KNU မိခင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်သစ်တွေအားလုံးဟာ ငွေနောက်နဲ့ ဗမာအစိုးရသစ်သိန်းစိန် အောင်မင်းတို့ရဲ့ ခြေဖ၀ါးအောက်ကိုပြားပြားဝပ်ကျရောက်သွားပြီဆိုတာ အထင်အရှားပါပဲ ကဲ ကရင်လူထုကြီးနဲ့ KNU တပ်မဟာ (၅) (၂)အပါအ၀င် ဗိုလ်ချုပ်စောလှဘွယ် ဗိုလ်မှူးဆန်းအောင်တို့ဘာလုပ်ကြမလဲ တပ်မဟာ (၅)စောဘောကျော်ဟဲဘယ်လမ်းကိုရွေးမလဲ။ အခု ဗမာစစ်တပ်တွေ နယ်မြေစိုးမိုးဖို့ရိက္ခာတန်းတွေကို KNU တပ်စပြီးဖြက်ဆီးနေပြီ အချိန်သိပ်နောက်ကျမှဆို ကချင်ဒေသလိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်နော် (အရေးပေါ်အချိန်ကိုရောက်ပြီ) KNU အတွင်းရော အပြင်က Robert Htwe ရော ဗမာနောက် ကောက်ကောက်ပါသွားကြပြီ ဘာလုပ်ကြမလဲ ကရင်လူထု အထုပ်အပိုးပြင်ရမှာလား ကာကွယ်ပေးမှာလား စဉ်းစားပြီး အမြန်အကောင်အထည်ဖေါ်ကြပါ။
ကျနော့်ကရင်လူမျိုးများအားလုံးကို ကျနော်လေးစားတယ်။ ချစ်တယ်။ တန်ဖိုးထားတယ်။ ကျနော်သတိပေးချင်တာက အခြေအနေမှန်။ အကြောင်းအရာမှန်တစ်ခုကို မသိရင် ဝေဖန်ချင်သလို မဝေဖန်ကြပါနဲ့ ။ တကယ်သိ တကယ်လက်တွေ့ မှာ ခံစားမှ ရေးပါ၊ ယခုလက်ရှိ ဒီဆောင်းပါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်မှန်တယ်။ မှားတယ်၊ ဆိုတာ ကျနော်မပြောလိုဘူး။ ကျနော်ဒီဆောင်းပါးကိုကြည့်တာနဲ့ ဘယ်သူရေးတယ်ဆိုတာကျနော်ကောင်းကောင်းသိတယ်၊ သူလည်းအများကြီးထပ်လေ့လာရအုံးမယ်၊သင်ယူရအုံးမယ်၊ဒါတွေမကသေးဘူး လက်တွေ့ မှာ လုပ်ကြည့်ရအုံးမယ်၊ဒါမှ သူ့ ရဲ့ဆောင်းပါးက ပိုပြီးတော့ မှန်ကန်ရုံသာမက အနှစ်သာရလည်းရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ကရင်ဝေဖန်ရေးသမားများအပါအ၀င် အခြားဝေဖန်ရေးသမားမျာကိုပါ ကျနော်ပြောတာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဆက်လက်ကြိုးစားအုံးနော်။ဘိုင့်ဘိုင်။
I know most Karen people worry that the KNU will fall and mislead. They worry that they will be used by the Burmese government to betray their people.
I hope the leaders will hear this and be careful and cautious to deal with the government. Yes, we don't want the fighting, and we want to live peacefully. But we all have doubt about the government peace process.
If the government really want peace, they should withdraw some of their troops and they shouldn't upgrade their bases in Karen state and all ethnic areas. They should not focus only on development. Without the ethnic issue is resolved, there will be no peace in Burma.
ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် တပ်မဟာ ၂၊ ၅၊ ဒီကေဘီအေ၊ ကေအင်ယူ/ကေအင်အယ်အေ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ ကရင်ပြည်သူလူထု အားလုံးပေါင်းပြီးတော့ နည်းမျိုးစုံသုံး ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်မယ်ဆိုရင် လူမျိုးနဲ့ပြည်ကိုရောင်းစားမယ့် ကေအင်ယူခေါင်း ဆောင်တစ်ချို့နဲ့နောက်လိုက် တပ်မဟာ ၁၊၃၊၄၊၆၊၇ တွေဟာ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာနေစရာမြေရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ယုံကြည်တယ်
..we should stand on the rigt side clearly....we sould against the lie,
unity is from the honesty. if we want to sucess, we should unite and stand clearly on the right side..